नेपालीले खान्छन् वार्षिक ५५ अर्बको औषधि, झण्डै आधा उपभोक्ता काठमाडौंका | Nepal eNews - Nepali Online News Portal
नेपालीले खान्छन् वार्षिक ५५ अर्बको औषधि, झण्डै आधा उपभोक्ता काठमाडौंका
नेपालमा पछिल्लो एक दशकमा वाषिर्क खपत हुने औषधिको हिस्सा झण्डै ३५ अर्बले बढेको छ । औषधि व्यवस्था विभाग र औषधि व्यवसायी संघको तथ्यांकलाई आधार मान्दा यो बर्सेनि १० प्रतिशतको दरमा यसको खपत बढ्ने गरेको छ । यसको पनि कूल खपतको ४० प्रतिशतको हाराहारीमा त काठमाडौं उपत्यकाबासीले नै खपत गर्ने गरेका छन् ।
विभागका महानिर्देशक पानबहादुर क्षेत्री विशेषगरी शहरी भेगका मानिसहरुले धेरै औषधि खपत गर्ने गरेको बताउँछन् । पछिल्लो समय नयाँ नयाँ किसिमका रोगहरुको समेत पहिचान भएकोले यसको खपत केवल मूल्य बृद्धिका कारण मात्रै नभएर बिरामीको हुनेको संख्या समेत बढेको बताउँछन् । यद्यपि औषधि बिक्री भएको रकमको आधारमा यसको खपत कति भयो ? भनेर तथ्यांक सार्वजनिक गरिने भएकोले यसमा मूल्य बृद्धिको पनि योगदान हुने गर्छ ।
औषधि व्यवस्था विभाग र नेपाल औषधि व्यवसायी संघका अनुसार अहिले नेपालमा वर्षेनी ५० देखि ५५ अर्बसम्म रुपैयाँसम्मको औषधि खपत हुने गरेको छ । यो तथ्यांक कुनै अध्ययनबाट निस्किएको विवरण नभई व्यापारको आधारमा गरिएको अनुमान मात्रै हो ।
यो तथ्यांक हरेक वर्ष फरक फरक तरिकाले निकाल्ने गरिन्छ । औषधि व्यवस्था विभागले हरेक वर्ष आर्थिक बृद्धि र मूल्य बृद्धिको दरमा औषधिको खपतको तथ्यांक अनुमान गर्ने गरेको छ । महानिर्देशक क्षत्रीले औषधिको खपतको अवस्था हरेक वर्षको मूल्य बृद्धि र आर्थिक बृद्धिको आधारमा निकालिने जानकारी दिए । खपतकै बारेमा अध्ययन हुने नगरेको भन्दै हरेक वर्ष १० प्रतिशतको हाराहारीमा औषधिको खपत बढ्ने अनुमान गरिने बताए । उनले ५० अर्बको हाराहारीमा औषधिको खपत हुने गरेको अनुमान पेश गरे ।
नेपाल औषधि व्यवसायी संघले विभागकोभन्दा केही वैज्ञानिक रुपमा औषधि खपतको हिस्सा निकाल्ने गरेको भएपनि यसबारे संघको तथ्यांक समेत स्पष्ट छैन । संघले आफ्नो खपत र विदेशी औैषधि आयातको आधारमा यसको तथ्यांक निकाल्ने गर्छ । संघका अध्यक्ष मृगेन्द्र मेहर श्रेष्ठले औषधिको आयात र आन्तरिक औषधिको बिक्रीको आधारमा यसको विवरण निकाल्ने गरिएको जानकारी दिए । यस्तो गर्दा कूल औषधि खपत ४८ अर्बदेखि ५५ अर्ब रुपैयाँसम्म हुने संघको तथ्यांकमा उल्लेख छ । श्रेष्ठका अनुसार कूल औषधि खपतको ४५ प्रतिशत आन्तरिक उत्पादनबाट र बाँकी ५५ प्रतिशत नेपाल बाहिरबाट आयात हुने गरेको छ ।
त्यस्तै, संघले निकाल्ने तथ्यांकमा हरेक खपतमा ०.२ प्रतिशतदेखि ०.५ प्रतिशतसम्म औषधि खपत नभई हरेक वर्ष खेर जाने भएकोले त्यसलाई घटाएर मात्रै खपत हुने प्रतिशत निकालिने उनले बताए ।
एक दशकमा वाषिर्क ३८ अर्बको बढी औषधि
पछिल्लो एक दशकको औषधि खपतको तथ्यांकलाई आधारमान्दा वाषिर्क ३८ अर्बको औषधि खपत बढेको भेटिएको छ । संघले दिएको जानकारी अनुसार सन् १९९९ मा अनुमानित ५ अर्ब ९० करोड रुपैयाँको औषधि खपत भएकोमा त्यसको ५ वर्षपछि सन् २००५मा १० अर्ब रुपैयाँको औषधि खपत भएको देखिएको छ । त्यसको अर्काे वर्ष औषधिको खपत घटेर ९ अर्ब ६१ करोड रुपैयाँ भएको थियो । त्यसको अर्काे वर्ष फेरि एक्कासी १४ अर्ब रुपैयाँको औषधि प्रयोग भयो । यो संख्या २००९ मा आइपुग्दा १७ अर्ब पुगेको छ । यो तथ्यांक १० वर्ष पछि आइपुग्दा ५५ अर्ब रुपैयाँसम्म पुगेको हो ।
नेपालमा औषधिको खपत यति धेरै बढ्दा पनि यसमा नेपाली उद्योगको सहभागिता भने अझै बढ्न सकेको छैन । सन् २००० मा २५ प्रतिशत औषधि नेपाली उत्पादनको खपत गरिने गरेका नेपालीहरुले २०१० सम्म आइपुग्दा ४२ प्रतिशत औषधि आफ्नै देशको खपत गर्ने गरेका थिए । अहिले झण्डै १० वर्षपछि आइपुग्दा पनि ३ प्रतिशत मात्रै बढीले हुने ४५ प्रतिशत हुनुले औषधिमा नेपाल आत्मनिर्भरताको बाटोमा नगएको पुष्टि हुन्छ । संघका अनुसार अहिले कूल आयातित विदेशी औषधिको ९० प्रतिशत औषधि भारतबाट मात्रै आयात हुने गरेको ।
कूल खपत हुने मध्ये नसर्ने रोगको औषधिहरु धेरै खपत हुने गरेको विभागले जनाएको छ । विभागका अनुसार यसमा सबैभन्दा धेरै एन्टिबायोटिक र सबै प्रकारका नसर्ने रोगका औषधिहरु पर्छन् । त्यसमा पनि मुटु रोग र चिनी रोगका औषधि धेरै भएको विभागले जनाएको छ । अहिले नेपालमा साढे सात हजार ब्रान्डका विदेशी औषधि दर्ता भएका छन् । विभागका अनुसार क्यान्सर, एचआइभी/एड्स, न्यूरोसम्बन्धी, मृगौलालगायत क्रिटिकल केयरका रोगीलाई खोपबाट दिइने औषधि समेत धेरै आयात गरिने गरेको छ ।
विश्वभर झनै भयावह स्थिति
विश्व स्वास्थ्य संगठनको एक तथ्यांक अनुसार सन् १९९९ मा विश्वका कूल १५ प्रतिशत मानिसहरुले कूल औषधि उत्पादनको ९० प्रतिशत खपत गरे । विश्वव्यापी रुपमा वाषिर्क हुने औषधिको खपत डरलाग्दो रुपमा बढेको छ । औषधि खपत तुलनात्मक रुपमा कम देखिएको भएपनि गरिब मुलुकमा समेत औषधिको खपत बढिरहेको छ । विश्वमा अबको ५ वर्ष पछि अर्थात् २०२३सम्ममा १५ खर्ब अमेरिकी डलर बराबरको औषधि खपत हुने अनुमान गरिएको छ ।श्राेत onlinekhabar
सावधान ! यी ७ चरित्रका पुरुषसँग प्रेम नगर्नुस्, धोका पाइएला
यी हुन् दुनियाका सबैभन्दा धेरै चिनी खाने देश